တိုကျို | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » တိုကျို
Updated: 2017-05-17 10:35
မီတာက မိုရိဂျိဘုရိ ပြတိုက်
တိုကျို မီကာတာ မြို့ မှာ ရှိ တဲ့ မြို့ နယ် အန်းနီးမဲရှင်း ပြ အနု ပညာ ပြ တိုက် ပဲဖြစ် ပါတယ်။ အားလုံး နဲ့ ရင်း နှီး ပြီး သား ဖြစ် တဲ့ အန်း နီးမဲ ရုပ် ရှင် ( တိုနရိ နော့ တိုတိုရော့ ) ( မာဂျောနော့ တကရူးဘင...
Updated: 2016-06-23 15:00
ရှင်းဂျု ခု မြို့ ပြ ၊ ခဘုခိချော တိုကျို
ရှင်း ဂျု ခု မြို့ ဟာ တို ကျို ရဲ့ မြို့ ပြ ယဉ် ကျေးမှု အချက် အချာ အကျ ဆုံး နေ ရာ တစ် ခု ဖြစ် ပြီး တော့ ဂျပန်နိုင် ငံ နာပါတ် ၁ အစည်ကား ဆုံး မြို့ ပြ ဖြစ် ပါတယ်။ ရှင်းဂျုခု ဘူတာ ဟာ ဆို ရင် တစ်နေ့တစ်နေ့...
Updated: 2016-06-23 14:48
မဲဂျိ နတ် ဘုရားကျောင်း ဟာ မဲဂျိ ဧကရာဇ် နဲ့ ရှောကဲန်း ဧကရာဇ် ကို ရည် စူး ပြီး တည် ထား ကိုး ကွယ် ခဲ့ တဲ့ နတ် ဘု ရားကျောင်း ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ ( တည်ထား ကိုး ကွယ် ၁၉၂၀ ခု နှစ်) နှစ် သစ် ကူး ဆုတောင်း ပွဲ တွေ...
Updated: 2016-06-23 14:38
ဂျပန် နိုင် ငံ ဒုတိယ အမြင့် ဆုံး ဆက် သွယ် ရေး တာဝါ တစ် ခု ဖြစ် ပါတယ်။ အမြင့် ၃၃၃ မီတာ ။ စကိုင်း ထရီး မပေါ် ခင် ဂျပန် နိုင် ငံ ရဲ့ အမြင့် ဆုံး တစ် ၀ါ တစ် ခု ဖြစ် ပါတယ်။ အမြင့် ၁၅၀ မီ တာ မှာ ရှု ခင...
Updated: 2016-06-23 14:19
ဆဲန်းဆိုး ဂျိ ဘုရားကျောင်း
ပြည်တွင်း ပြည် ပ နှစ် စဉ် လာ ရောက် လည် ပတ် သူဦး ရေ သန်း သုံးဆယ် ကျော် ရှိ တဲ့ မြို့ တွင်း ရှေး အကျ ဆုံး ဘုရားကျောင်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်( ၆၂၈ ခုနှစ် ) ။ ခန်း အွန်း ဘာ သာရဲ့ ပင် မကျောင်းတော်ကြီး ဖြစ် ပြီး တေ...
Updated: 2016-06-23 13:57
ကိုးကရော ဂိုင်းအဲန်း ( ဧကရာဇ် နန်းတော် မျက်နှာစာ ဥယဉ်တော် )
ဧကရာဇ် နန်းတော် ဥယဉ် ဟာ ဧကရာဇ် စံမြန်း ရာ နန်း တော် ရဲ့ ရှေ့ လွင် ပြင် နဲ့ နန်းတော် ပတ် လည် အပြင် ဖက် ပိုင်း ကို ခေါ်ဆို ပါတယ်။ လွင်ပြင် ကျယ် ကြီး အပြင် ဆာကူရာဒ ဂိတ် နဲ့ နိဂျူး တံတား တို့ ဟာ ဂျပန် နိုင...
Updated: 2016-06-23 13:25
တိုကျို ဒစ်ဇ်နီလန်း အပန်းဖြေကစားကွင်း
( အိမ်မက် တိုင်းပြည့် နဲ့ မှော် ကမ္ဘာ မှ ကြို ဆို ပါ ၏။ ) ဆို တဲ့ ဆောင် ပုဒ် နဲ့ ကမ္ဘာ မှာ နာမည် ကြီး ထင် ပေါ်ကျော်ကြား သော တိုကျို ဒစ်ဇ်နီလန်း ။ အထူးသဖြင့် နွေဦး ရာ သီ နဲ့ နွေရာသီ အားလက် ရက် တွေ မ...
Updated: 2016-06-21 16:59
ဂင်းဇာ ဟာ ဂျပန် နိုင် ငံ ရဲ့ အထက် တန်း လွှာ မြို့ လေး တစ် ခု ဖြစ် ပါတယ်။ နိုင် ငံ တကာ တန်း ၀င် ဈေးဝယ်စင်တာ ကြီးတွေ လဲ ရှိပါတယ်။ ဂျပန် နိုင် ငံ ရဲ့ အထက် တန်း ဈေး ဆိုင် တွေ၊ ကုန် တိုက်တွေ ၊နဲ့ ကမ္ဘာ န...
Updated: 2016-06-21 16:48
တိုကျို မြို့ နာဂါ့နို နယ်မြေမှာ ရှိတဲ့ စုပေါင်း အဆောက် အဦး ကြီး ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ အောက် ထပ် တွေ မှာ က ရှော့ ပင်း စင် တာ တွေ ၊ အလယ်ထပ် နဲ့ အပေါ်ထပ် တွေ က လူနေ အဆောက် အဦး တွေပဲဖြစ် ပါတယ်။...
Updated: 2016-06-21 16:35
တိုကျို မြို့ ဒိုင်းတိုး နယ်မြေ ရဲ့ JR အရှေ့ ပိုင်း မီး ရထား လိုင်း အိုကချိမချိ ဘူတာ၊ ဥအဲနိုဘူတာ ကြား ၊ ရာမနိုတဲ လိုင်း ရဲ့ ကိုးခခရော အနောက် ပိုင်း နဲ့ အောက် ပိုင်း ရဲ့ ၅၀၀ မီတာလောက် ကို ဗဟို ပြ...